Nnwom 143 NA-TWI - Mmoa mpaebɔ - Awurade, tie me mpaebɔ! - Bible Gateway
Nnwom 142Nnwom 144
Nnwom 143 Nkwa Asem (NA-TWI)
143 Awurade, tie me mpaebɔ! Wo trenee mu, tie m’adesrɛ. Gye me so wɔ wo nokware turodoo mu! 2 Nsɔ me, w’akoa, nhwɛ! Obiara nyɛ pɛ w’anim.